Otu esi achọta SEO SEO | Martech Zone
Otu esi acho SEO
Saturday, January 21, 2012 Sunday, Jenụwarị 22, 2012 Douglas Karr
Ihe ochicho njini ka bu ihe eji eme abuo. Ọ bụ ezie na Google na-enye webmasters ụkpụrụ nduzi iji bulite saịtị ha iji rụọ ọrụ nke ọma iji wee chọta ma depụta aha ha nke ọma, ụfọdụ ndị SEO maara na iji algorithms ndị ahụ eme ihe nwere ike gbaa ha ozugbo. Ndị ọrụ SEO na-enwe nrụgide dị ukwuu iji mee ka ụlọ ọrụ ha dị elu nke ọma, ndị na-ahụ maka SEO nọ n'okpuru ọbụna karị.
Ndị ụlọ ọrụ nwere ike ha agaghị amata na ndị ọrụ ha nwere ike ị na-eme mkpirisi. Companieslọ ọrụ ndị na-etinye ego na ndị na-ahụ maka ndụmọdụ ma ọ bụ ụlọ ọrụ SEO nwere ike bụrụ ndị amaghị ihe niile gbasara onye ndụmọdụ ahụ na-ewetara ha ogo ha chọrọ. Ná mmalite afọ gara aga, JC Penney mụtara nke a n'ụzọ siri ike mgbe New York Times gbara akwụkwọ, Ihe ruru unyi nke ihe nchọ. Omume a na-aga n'ihu, agbanyeghị, n'ihi na oke osisi dị elu.
Nwekwara ike ịchọpụta na asọmpi gị na-aghọ aghụghọ. Kedu? Ọ bụ n'ezie ezi mfe.
Ọ bụrụ na onye ndụmọdụ SEO ma ọ bụ onye ọrụ bụ anaghị agwa gị ka ị gbanwee gaa na saịtị gị ma ọ bụ ọdịnaya gị, enwere ezigbo ohere na ha na-arụ ọrụ naanị na saịtị iji mepụta ọdịnaya nke na-ejikọ azụ na saịtị gị site na backlinks bara ọgaranya. Google na - akwado saịtị dabere na ole saịtị ndị ọzọ na - ejikọ ha. Ọ dabere na ikike saịtị njikọ. Ọ bụrụ na ị na-akwụ ụgwọ maka ọdịnaya saịtị, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ maka backlinks na ọbụnadị ị gaghị amata ya.
Chọọ ngalaba ị nwere ike inyo na Mepee Nchọgharị Site. Tinye ngalaba wee pịa Text Anchor taabụ. Ka ị na-elegharị anya na nsonaazụ ahụ, lelee saịtị ọ bụla aga iji Keywords iji jikọọ na ngalaba na ajụjụ. Mgbe ịmalitere ịchọta oghere a na-emeghe, njikọta na ntinye aka nke ndị ọrụ, yana blọọgụ na enweghị isi… nwere ike ị na-arụ ọrụ na backlinks akwụ ụgwọ.
Ọ bụrụ na onye ndụmọdụ gị SEO bụ ide na idobe ọdịnaya maka ụlọ ọrụ gị, jide n'aka na ị kwadoro ọdịnaya ahụ ma nweta ndekọ nke ebe ha na-edo ya. Ekwela ka ebipụta ọdịnaya gị na saịtị ndị na-adịghị mkpa, juputara na mgbasa ozi na backlinks ndị ọzọ, ma ọ bụ na-adịchaghị mma. Chọrọ ka ụlọ ọrụ gị jikọtara na saịtị kachasị mkpa yana saịtị dị mma - nakwere naanị nke kacha mma.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-akwado ọdịnaya, gaa n'ihu jiri Mepee Saịtị Sava iji nyochaa backlinks ọhụrụ. Mgbe ụfọdụ, ndị ọkachamara SEO ga-eziga ọdịnaya akwadoro n'otu ebe, mana na-aga n'ihu ịkwụ ụgwọ ma ọ bụ tinye backlinks ndị ọzọ na ebe ọzọ. Y’oburu na odi n’ile anya, odi ya. Ma oburu na otutu ihe njiko a yiri ihe iju anya, ikekwe gi na oru SEO cheat.
O kwere omume iweli ogo saịtị gị ọsọ ọsọ. Imchọpụta saịtị na ikpo okwu dị ugbu a bụ nzọụkwụ mbụ, wee bulie ya bụ ihe na-esote. Anyị na-amasị iji ụlọ ọrụ mmekọrịta ọha na eze ziri ezi ya na ezigbo mgbasa ozi iji kọọ akụkọ maka ndị ahịa anyị. Anyị anaghị enweta backlink mgbe niile even mana ọbụlagodi mgbe anyị anaghị eme ya, anyị na-enweta ndị na-ege ntị dị mkpa. Anyị na-ejikwa akwụkwọ ọcha, ebook, ihe omume na infographics iji nweta ụfọdụ ntị. Mgbe ị nwere ihe bara uru ijikọ ya, ndị mmadụ ga-ejikọ ya.
O doro gị anya na ị matara aghụghọ ahụ, gịnị ọzọ?
Obu onye oru? Iwepu njikọ ọjọọ adịghị mma, mana ị nwere ike ịjụ ha ka ha nwaa. Mee ka ha mata na anaghị anabata ya ma tinye ụlọ ọrụ ahụ niile n’ihe egwu. Zere ịkwụghachi ndị ọrụ gị ụgwọ maka ọkwa dị mma ma ọ bụ olu dị mma. Kama, kwụghachi ha ụgwọ maka inweta nkwuputa di egwu na saiti di nkpa.
Ọ bụ onye ndụmọdụ SEO? Mee ha oku.
Obu onye osompi? Google Search njikwa n'ezie nwere a na-akọrọ ụdị na- nyefere ngalaba na-azụta backlinks na saịtị ma ọ bụ ọrụ ị maara na ha na-arụ ọrụ iji nweta ha.
Amaghị ama abụghị ihe nchebe mgbe ọ na-abịa n'ịghọ aghụghọ ule iji nweta ọkwa SEO. Kwụ ụgwọ maka backlinks bụ imebi usoro ọrụ nke Google ma ga-eli saịtị gị, ma ịmara ya ma ọ bụ na ị maghị. Dee ọdịnaya dị oke mkpa, oge niile ị ga - enwe ọdịnaya na - adọta nyocha ọchụchọ. Echegbula ma ọ bụ nwaa ọnwụnwa site na ilekwasị anya n'usoro organicNa-elekwasị anya na nnukwu ọdịnaya ị ga - ahụ onwe gị n'ọkwá ka mma.
Ntụle ikpeazụ na nke a. Anọ m na-arụ ọrụ na atụmatụ azụlinking oge niile. Ọ dị mgbe m kwụrụ ụgwọ maka backlinks maka m ma ọ bụ maka ndị ahịa m? Eeh. Mana achọpụtara m kemgbe ahụ na ụzọ nkwalite ndị ọzọ na-ebute ukwuu Nsonaazụ… ọ bụghị naanị na nleta, mana n'ụzọ dị ịtụnanya n'usoro nakwa! M ka na-enyocha ogo ndị ahịa anyị ma na-enyocha backlinks ha mgbe niile. Site na nyochaa backlinks ha na saịtị ndị ha kwuru na ha, a na m achọtakarị nnukwu akụ nwere ike ide banyere ndị ahịa m. M na-enyekarị ndị ọrụ mgbasa ozi ọha na eze anyị ihe ndị a ma ha na-etinye ụfọdụ akụkọ ọma n'ebe ahụ.
Tags: njikọ azụbacklinkssearch engine njikarịchaASEO backlinking
Email Nnweta Email na ihe akaebe
Jenụwarị 22, 2012 na 11:58 PM
Nke a bụ ezigbo oge maka m. Anọ m na-enyocha site na mgbasa ozi na saịtị freelance saịtị guru.com ma ọ bụ ihe na-atụ ụjọ na ọnụ ọgụgụ saịtị ndị chọrọ nnukwu nsogbu ahụ n'usoro ugbu a maka naanị narị ego ole na ole. Kedu ka nke ahụ ga-esi mee, anyị na-eche, na-enweghị ụfọdụ backlinks akwụ ụgwọ, na ụzọ ndị ọzọ na-adịghị mma?
Dị ka ị na-atụ aro, PR bụ ụzọ siri ike iji bulie profaịlụ nke weebụsaịtị maka ọchụchọ yana naanị ohere iji wepụta ozi gị n'ọtụtụ ebe. Ighapu ọdịnaya saịtị gi na nhazi gi dikwa oke mkpa. Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ etu mgbasa ozi mmekọrịta na-esi emebi mmekọrịta ogo ọchụchọ, ebe ị nwere ike ịnweta ezigbo ndị ọbịa na saịtị gị na nnukwu SM, yana ogo ogo Google nwere ike iwe obere oge iji jide eziokwu ahụ na ị dị mkpa. E kwesịghị ile SEO anya na agụụ.
Jenụwarị 23, 2012 na 1:10 PM
E nwere ihe karịrị 22 ihe dị mkpa ka gị n'usoro, na ike dị ka 8/10 SPAM usoro, autoposts, njikọ, ugwo njikọ, igbochi….
Ihe kachasị mkpa bụ ihe mmadụ bu n'uche, ihe bụ Number one gị ọdịnaya.
Google n'usoro bụghị naanị ndị ọbịa, ọkwá oge ha na-eji na gị na saịtị, ọzọ oge pụtara àgwà ọdịnaya, ha hụrụ Ama ha na-achọ, na ha na-abịa azụ ọzọ… ..
Adịghị m nnukwu blogger ma ọ bụ azụmaahịa na-aga nke ọma, na-amalite mana echeghị na njikọ akwụ ụgwọ na-arụ ọrụ karịa ọdịnaya dị mma
ohuru na-ekpo ọkụ isiokwu peeji nke na gị bụghị ọkachamara mpi.
Ihe ndi ozo bu uzo ichoputa ihe i choro, isiokwu… Google bu ihe mepere emepe ichoro ka ị mara otu esi etinye ihe na ihe nile